အပေါ် Posted သြဂုတ်လ 6, 2018 သြဂုတ်လ 7, 2018 စာရေးသူ အင်ဒရူး ဟာ Off comments အဆိုပါထိပ်တန်းကာစီနိုဂိမ်းများအပေါ်
လောင်းကစားရာစုနှစ်လူ့ psyche ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တော်မူပြီ ကသေးငယ်တဲ့ flutter သို့မဟုတ်မြင့်မားသောရှယ်ယာအန္တရာယ်များမယ့်ဖြစ်စေ, လောင်းကစားလောကီသားတို့သည်အဆီသို့ကလူဆွဲယူသောအရာတစ်ခုခုရှိတယ်။ ထိုကာလ၌, ဂိမ်းအမျိုးမျိုးတစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားနှင့်အနိုင်ရတဲ့၏တိုးမြှင့်အခွင့်အလမ်းဆောင်ခဲ့တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ အွန်လိုင်းဂိမ်းဖြည်းဖြည်းပေမယ့်ဧကန်အမှန်လောင်းကစားရုံမှာတက်ရောက်သူကျော်တက်ကြသည်နေစဉ်, အဘယ်သူမျှမ Las Vegas မှနဲ့တူဟော့စပေါ့ဟာကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာကိုမြင်လျှင်အတူခရီးသွားဧည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု buzz ကျန်ကြွင်းသောငြင်းပယ်ရှိပါတယ်။ ထိပ်ဂိမ်းသို့သော်ဘာတွေလဲ? အောက်တွင်စောင့်ကြည့်ဖို့သုံးဖြစ်ကြသည်။
ပွဲတစ်ပွဲအကျော်ကြားဆုံးလောင်းကစားရုံဂိမ်းတွေထဲကဖဲချပ်ဝေဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ New Orleans တွင် 1829 အတွက်ကစား, ဒီဂိမ်းဆယ်စုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ ဒီနေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာတစ်ဦးအားကစားအဖြစ်ရှုမြင်နှင့်ပင်ပြိုင်ဘက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတီဗီနှင့်မီဒီယာအပေါ်လွှမ်းခြုံနှင့်အတူတစ်ကြီးမားကျယ်ပြ $ 10,000 ဝင်ပေါက်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရှိရာ၎င်း၏အလွန်ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာ့ဖလားစီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသှေးဆောငျ Poker ၏ဂါထာ "ဘယ်သူ့ကိုမှအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်" ပိုပြီးလူတို့သည်မိမိတို့ကံကြိုးစားရန်ခွင့်ပြုအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများအသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်အတူနောက်တဖန်ကစားသမားအချိန်နှင့်အချိန်ဆွဲယူအရာဖြစ်တယ်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ် '' Em ​​အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်ကစားခံရ Hold နှင့်အတူ Poker ၏မြောက်မြားစွာမူကွဲရှိပါတယ်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်များတွင် '' Em ​​Hold, ကစားနည်းလေးခုကျည်ကစားသမားကိုအကောင်းဆုံးလက်ငါးကတ်များပေါင်းစပ်ဖို့လိုအပ်နေအတူရှိပါသည်။ နည်းပညာနေ့တိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသောနှင့်အတူ, ကဲ့သို့သော Poker တစ်ဂိမ်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူယခင်ကထက်ယခုနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် Poker Bitcoin။ အဲဒီအစားပျော်စရာအခြားရွေးချယ်စရာအစားသင့် hard-ရရှိခဲ့ပြီးငွေသား, ရှယ်ယာ Bitcoin အလောင်းအစားထက်။
သင်တစ်ဦးလောင်းကစားရုံအတွင်းပိုင်းရာအရပ်ကိုကြာရာကိုမဆိုတီဗွီရှိုးသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်မြင်ကြပြီလျှင်, သင်က၎င်း၏အထင်ကရဘီး, ဗိုင်းငင်ဘောလုံးကိုနှင့်စားပွဲရှည်နှင့်အတူတစ်ကစားတဲ့စားပွဲပေါ်မှာမြင်ကြပြီပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ 18 အတွက်စတင်အစောဆုံးလောင်းကစားရုံဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်th ရာစုပြင်သစ်။ ဒါဟာ Poker ထက်ပိုမိုမြင့်မားလောင်းကြေးနှင့်အတူတစ်အန္တရာယ်များဂိမ်းဖြစ်ပါသည်, သေးအချို့ကစားသမားဒါစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ့ပါတယျ။ အဆိုပါအယူအဆအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်၏ သင်တစ်ဦးအရောင်သို့မဟုတ်နံပါတ်ပေါ်တွင်သင်၏လောင်း, သို့မဟုတ် (ထိုကဲ့သို့သော '' တောင်မှ '' ကဲ့သို့) ခန့် ထား. , ဖဲဝေထို့နောက်ဘောလုံးကို spins နှင့်သင်၏အလောင်းအစားမှသက်ဆိုင်ရာအရေအတွက်ကို / အရောင် / set ကိုပေါ်နိုင်ပါလျှင်, သင်အနိုင်ရ။ ကစားတဲ့ကစားသမားများဆွဲယူ သင်သူချင်းကစားသမားများနှင့်ကုန်သည်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်မှာလူမှုရေးဂိမ်း, အဘောလုံးကိုကျလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်သကဲ့သို့။ ဒါဟာသင်အနိုင်ရသည့်အခါအများကြီးပိုမြန်ထိုကဲ့သို့သော Poker ကဲ့သို့သောအခြားလောင်းကစားရုံဂိမ်းထက်, ဆန္ဒပြည့်အဓိပ်ပာယျလက်ငင်းဖြစ်ပါသည်, အစာရှောင်ခြင်း-PACE ပါပဲ။ ကတက်ကောက်နဲ့ကြိုးစားရန်အလွယ်ကူဆုံးတွေထဲကရဲ့အဖြစ်ကစားတဲ့သည်လောင်းကစားရုံမှအရင်ကဆိုရင်များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်သစ်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှအခြားအထင်ကရပုံရိပ်, တောက်တောက်အရောင်များ၏အတန်း, မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်, lit-up, slot ကစက်တွေ။ ၏သရေကျ အထိုင်စက်တွေ နောက်ဆုံးမှာသင်တစ်ဦးအချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သော $ 1 အဖြစ်တစ်ဦးကအလွန်နိမ့်လောင်းနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်ပေါင်းဘော်နှင့်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သငျသညျရိုးရိုးဗီဒီယိုဂိမ်းထဲကနေသင်ကအနိုင်ရခလုတ်အမျိုးမျိုးတွန်းဖို့လိုပါတယ်ဘယ်မှာ slot ကစက်တွေအထိနိုငျသောဂိမ်း, စတင်ရန်ပိုက်ဆံထည့်ပါ။ တစ်ဦး slot ကစက်ကနေထုတ်ပေးငွေဟာ $ 10,000 ရဲ့သို့အထိကြီးမားနိုင်ပါတယ်။
170 Ladbrokes ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Superior ကာစီနိုမှာ 170 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
StarGames ကာစီနိုမှာ 170 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
75 PrimeScratchCards ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကာစီနိုမှာ 175 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
Betspin ကာစီနိုတွင် အပ်ငွေမရှိသော ကာစီနိုဘောနပ်စ် 55 အခမဲ့
45 SlotsandGames ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Scratch40cash ကာစီနိုမှာ2မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
95 အခမဲ့ Osiris ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
125 အခမဲ့ဘော်ဒိုးကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
95 အခမဲ့အန်နာကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
Moobile အားကစားပြိုင်ပွဲကာစီနိုမှာ 40 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
Guts ကာစီနိုမှာ 165 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
35 အခမဲ့အတ္တလန္တိတ်ကလပ်ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
70 မာယာ Fortune မဂ္ဂဇင်းကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Bethard ကာစီနိုမှာ 125 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
BetChain ကာစီနိုမှာ 75 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
Dunder ကာစီနိုမှာ 60 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
အားလုံးစတား slot ကာစီနိုမှာ 95 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
Bellini ကာစီနိုမှာ 70 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
65 အခမဲ့မြောက်ပိုင်းအလင်းများကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
155 LSbet ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
ဂတ်စ်လှည့်ဖျားကာစီနိုမှာ 70 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
65 အခမဲ့ Butler ဘင်ဂိုကစားကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins